Maxay u jiraan afar xisaabood oo Injiil ah? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Maxay u jiraan afar xisaabood oo Injiil ah?
Mararka qaarkood waxaa la i waydiiyaa haddii uu jiro hal Injiil oo keliya, haddaba maxaa ugu jira afar kitaab oo Injiil ah oo ku jira al Kitaab (Baybalka), oo mid walba uu qoray qoraa kala duwan? Miyayna taasi ka dhigin kuwo been abuur ah oo aan xagga Eebe ka iman.
Baybalku (al Kitab) wuxuu naftiisa ka yidhi:
“Qorniinka oo dhami waa mid Eebbe ku afuufo oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda, iyo canaanta, iyo hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada in ninka Ilaah aad ugu diyaar garoobo shuqul kasta oo wanaagsan.” (2 Timoteyos 3:16-17).
Haddaba Baybalka/al Kitab wuxuu sheegaa in Ilaah yahay qoraaga ugu dambeeya tan iyo markii uu u waxyooday qorayaashan aadanaha. Halkaa marka laga eego Qur’aanku si buuxda ayuu ugu heshiiyey sidii aan ku soo aragnay ku dheji waxa uu Quraanku ka sheegay Baybalka. Waxaan sidoo kale aragnay halkan in Isa al Masih u ballan qaaday xertiisa hanuuninta Ruuxa runta markay ka markhaati furayaan injiilka.
Laakiin sida loo fahmo afarta kutub ee Injiilka hal Injiil? Qur’aanka kariimka ah waxa inta badan ku sugan dhawr tuduc oo ka warramaya hal dhacdo, marka la isu geeyona waxay noo ogolaanaysaa inaan sawir buuxa ka helno dhacdadaas. Tusaale ahaan, the Qorniinka Calaamka Aadan U isticmaal Surat 7:19-26 (The Heights) si uu nooga sheekeeyo Aadam Jannada dhexdeeda. Laakiin sidoo kale waxay adeegsatay Suuradda 20:121-123 (Ta Ha). Waxayna tuducan 2aad siisay fahan dheeri ah oo ku saabsan Aadam isagoo ku macneeyay in ‘la sasabay’, oo Heights uusan ku jirin. Isku soo wada duuboo waxay sawir buuxa naga siiyeen sidii ay wax u dhaceen. Taasi waxay ahayd ujeedadu – in tuducyadu is dhammaystiraan.
Si la mid ah, afarta xisaabood ee Injiilka ee Baybalka (al Kitaab) ayaa had iyo jeer ku saabsan oo keliya hal Injiil. Isku soo wada duuboo waxay si buuxda u fahmayaan Injiilka Isa al Masih – NNKH. Mid kasta oo ka mid ah xisaabaadka afarta ah ayaa leh waxyaabo aanay saddexda kale haysan. Sidaa darteed, marka la isu geeyo waxay soo bandhigayaan sawir dhammaystiran oo Injiil ah.
Taasi waa sababta marka nuxurka Injiilka laga hadlo ay had iyo jeer noqoto mid kali ah, sababtoo ah waxaa jira hal Injiil oo keliya. Tusaale ahaan waxaan halkan ku aragnaa Axdiga Cusub in uu jiro hal injiil.
Waxaan rabaa inaad ogaataan walaalayaal taas ka injiilka aan ku wacdiyey ma aha wax uu nin ka dhigay. Maan helin it nin ka yimid, anigana la ima barin it; halkii, waan helay it xagga waxyiga ka yimid Ciise Masiix. ( Galatiya 1:11-13 ) .
Injiilka sidoo kale wuxuu ku qoran yahay keli keli ah Qur’aanka Kariimka ah (eeg Habka ‘Injiilka’ ee Qur’aanka). Laakiin markaan ka hadalno markhaatiyaasha ama buugaagta injiilka waxaa jira afar. Dhab ahaantii Taurat, arrin laguma go’aamin karo markhaati keliya oo keliya. Sharciga Muuse wuxuu u baahan yahay ugu yaraan ‘laba ama saddex markhaati’ (Sharciga Kunoqoshadiisa 19: 15) inuu ka marag furo hal dhacdo ama fariinta xiisaha gaarka ah. Bixinta afar xisaabood oo markhaati ah injiilka waxaa lagu taageeraa in ka badan shuruudaha ugu yar ee Sharciga.